Hızlı Hava Taşımacılığı Sektörünün Kurucusu DHL 50 Yaşında - RayHaber
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulDHL 50 waa aasaasaha Warshadaha Gaadiidka Hawada Sare
DHL 50 waa aasaasaha Warshadaha Gaadiidka Hawada Sare
26 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, 49 Jarmalka, YURUB, DUNIDA, GUUD, Madaarada, WADADA, Gobolka Marmara, TURKEY 0
aasaasaha waaxda gaadiidka hawada sare
DHL 1969, oo ay aasaaseen seddex saaxiib oo dejiyay 50 oo leh fikradda ah in lagu wareejiyo dukumiintiyada xamuulka xamuulka ee xamuulka gacmahooda. u dabaaldegaya da’diisa. Maaddaama uu yahay wakiilka saadka hal-abuurka ee nus-qarni, shirkaddu waxay u hibeysay warshadaha maanta waxayna sii wadaysaa fududeynta ganacsiga caalamiga ah shabakadeeda ee 220 dalka iyo gobolka.
Wax yar ka dib markii Neil Armstrong cagta saaray cirka, Adrian Dalsey, Larry Hillblom iyo Robert Lynn waxay sameeyeen fikrad kacaan ah oo ku wareejinta dukumiintiyada xamuulka xamuulka iyagoo wata boorsada gacanta. Tan waxaa la xiriira ansixin caadooyinkii oo xamuul, maraakiibta bilaabi kartaa inta aan la gaadhin Ahaado, Kuna loogu tala galay u xuub soo gaabiyey waqtiga sugitaanka dekedda. Fikradda ayaa sidoo kale calaamad u ah bilowga warshadaha cusub, gaadiidka cirka caalamiga ah ee degdega ah iyo DHL safarka qaaska ah.
50 Deutsche Post DHL Group, oo noqotay mid ka mid ah shirkadaha ugu sareeya saadka ee adduunka maanta, waxay ka shaqeyneysaa inay u fududeyso nolosha maalinlaha ah iyo tan gaarka ah ee dadka iyada oo loo adeegsanayo sahaydeeda hal-abuurka cusub iyo xallinta gaadiidka. John Pearson, madaxa guud ee DHL Express, waa shirkadda 50 ee shirkadda iyo warshadaha gaadiidka hawada ee degdega ah. Qiimayntiisii
Olarak Shirkad ahaan, waan ku faraxsanahay inaan aragno inaan saameyn waarta ku yeelanay qaybta iyadoo adeegyo badan aan horumarinay ilaa maanta. Delivery iyo geedi socodka maraakiibta oo aad u sida hufan sida ugu macquulsan ee silsiladda sahayda oo dhan si ay u taageeraan shaqaalaha in wax ganacsi ah, waxaana isagoo si ay u tijaabiso iyo farsamooyinka cusub si nolosha. Ka sokow adeegsiga xaqiiqda aadka u weyn iyo xalalka robotic ee silsiladda sahayda, waxaan ku hanweynahay inaan helay habab cusub oo lagu gaarsiiyo gaar ahaan meelaha gaarsiinta ay adag tahay in la gaaro. Tusaale ahaan, xirmada baakadheena DHL ee iskeed u taagan ayaa noo oggolaaneysa inaan dawooyin dhakhso leh gaarsiino jasiirad fog oo ku taal harada Victoria, macaamiisha Shiinaha ayaa si joogto ah u hela dukumiintiyo muhiim ah laba jeer maalintii. Intaa waxaa dheer, waxaan u horumariyaan oo ay soo saaraan ay StreetScooter noqon doonaa, in mustaqbalka warshadaha ee logistics iyo talaabadii ugu horeysay ee xalka dhibaatooyinka wejiga geesi on ilaalinta deegaanka ayaa horay noo sahlay in ay qaataan. "
Pearson: "Sannadkan waxaan ku beeran doonnaa geedo xNUMX milyan oo adduunka oo dhan ah"
Isagoo tilmaamay in Deutsche Post DHL Group ay sidoo kale kaalin firfircoon ka qaadatay ilaalinta deegaanka, Pearson wuxuu taabtay bartilmaameedka eber eber ee 2050 wuxuuna yiri, “Guulkan muhiimka ah ee matalaya kooxdeena wuxuu ku saleysan yahay labada bartilmaameed ee ku-meel-gaarka ah ee aan u dejinay nafteena sanadka 2025 iyo Zero Emission. X 2050 marka loo eego baaxadda istiraatiijiyadeenna sii wadista. Waxaan ku kalsoonahay inaan ku guuleysan doonno si guul ah anigoo u mahadnaqaya ololayaal badan iyo dhacdooyin la bilaabay oo qayb ka ah sanad-guuradayada. 50. Waxaan u qabanqaabinay xaflado badan dalal badan gudaha xadka sannad-guuradayada. Laakiin muran dhacdada ugu duwanyihiin ee sannadka noo, Bryan Adams, waxaan isaga la socday sida lamaane si rasmi ah logistics "Shiine A Light" waxaa fuliyey hoos safar xilli beerto geedka. Si wada jir ah waxaan rabnaa inaan qaadno dhaqan tusaale ah xagga ilaalinta cimilada; Annaga oo kaashanayna Bryan Adams, Arbor Day Foundation, Plant-for-Planet, WeForest iyo Taking Root, waxaan ballan qaadnay inaan geed u beernay tigidh kasta oo riwaayad ah oo la iibiyo. Sannadkan waxaan ku beeran doonnaa hal milyan oo geed oo adduunka ah. ”
Lassen: “50. Mid ka mid ah maalgelinta ugu muhiimsan ee sano our ee Turkey "
The CEO oogeen Express Turkey Claus Lassen, waxay bilowday howlgallo in 1981 dalka Turkiga oo wuxuu ku yidhi 38 ay leeyihiin sano ee taariikhda, "Tan iyo markii la aasaasay fududeeyaha ganacsiga caalamiga ah, waxa aan isku xirta Turkey dunida. Dhoofinta Company dhowaad bixiyaan waxyaabaha dhamaystiran iyo adeegyada si ay u sida ugu fudud ee ganacsiga ee Turkey samaynaya. Intaa waxaa sii dheer, shirkaddeena adduunka oo dhan 50. sanadkiiba mar marka dabaal, Waxaan ku faraxsanahay in la fulineynin mid ka mid ah maalgelinta ugu muhiimsan ee Turkey. Waxaan qorsheyneynaa inaan ka furno xarunteenna howlaheena cusub ee garoonka diyaaradaha ee Istanbul, kaasoo ah maalgashi dhan 135 milyan oo wadar ah haatanna uu socdo dhismaha.
DHL's 50 sanadka
DHL, 2019 1969 waa shirkadii aasaastay seddex ganacsade oo San Francisco ku yaal 50. Sanadka Cusub. DHL waxay jajabisay wasakheynta qeybta gaarsiinta dhaqameed iyadoo la adeegsanaayo adeeg cusub oo cusub kaasoo meesha ka saaray in xafiisku uu gaarsiisan yahay dukumiintiyo hawada muddo gaaban gudaheed. Tan iyo markaas, DHL waxay ku kortay qoys caalami ah oo ka mid ah shirkadaha DHL oo leh ku dhawaad ​​220 kun oo shaqaale ah dalka iyo gobolka, oo daboolaya dhammaan baaxadda saadka iyo adeegyada silsiladda. Xarunta macaamiisha ee DHL-centric iyo dhaqanka xalka-xNUMX waxay shidaalka u ahayd hal-abuurka sanadka oo dhan; Laga soo bilaabo DHL 380, oo ah mid ka mid ah kumbuyuutarrada ugu horreeya ee lagu adeegsado kombuyuutarrada adduunka, laga bilaabo DHL Group, oo ay soo saartey Deutsche Post DHL Group, ilaa StreetScooter, oo caado loo sameeyay, gaari gaarsiinta bii'ada u wanaagsan oo ay ku shaqeeyaan korantada, DHL, iyada oo ka go'an tahay in la gaaro "50" uumi-baxa kooxdu illaa 1000. wuxuu sii wadaa inuu hogaamiyo waaxda saadka.
ShipsGo, Shabakadda Daarifka ee Warshadaha Gaadiidka Konteynaradu waxay ku dabaaldegaan Sanadkeedii Saddexaad 11 / 03 / 2019 madal Turkey ugu horeysay ee digital shipsgo badaha taas oo u dabaal sanadkii saddexaad sida ee todobaadkan. Mashruucaas, oo loo aasaasay inuu u adeego ganacsiyada ganacsiga dibadda, dadka wax soo dejiya iyo kuwa weelka lagu haysto, ayaa loo isticmaalaa in ka badan wadamada 160. 11 Maarso Shirkadda ayaa ka shaqaynaysay tan iyo 2016 waxayna kordhisay tirada iyo tayada adeegyadooda sannadihii ugu dambeeyay ee 1. Thanks to algorithm gaar ah oo ku salaysan falanqaynta xogta weyn, oo loo yaqaan 't Octopus ucu', oo laga helay natiijada cilmibaarista R & D ee lagu sameeyey Zone Development Technology Zone, isticmaalayaasheeda; waxay bixin kartaa kharash yar, wakhtiga transit iyo fursadaha dekadaha yar. ShipsGo waxa kale oo ay leedahay silsiladda saadka ee gaadiidka badda ...
Wakiilo ka socda Waaxda Gaadiidka iyo Saadka ee TCDD ayaa la kulmay 15 / 12 / 2016 Logistics Industry la kulmay Wakiilada ee Turkish Tareennada State Transport: Tareennada State iyo gaadiidka tareenka ka shaqeeya Turkish adeega warshadaha Saadka ah, saarayaasha baabuur xamuulka iyo bixiyeyaasha, iyo saraakiisha DTD UTIKAD ku kulmay Ankara. taariikhda December 9 2016 shirka lagu qabtay Manager Ankara Gaadiidka TCDD General Kurt Veys, Manager Kaaliyaha Guud Mehmet Uras iyo madaxdii waaxda ka qeyb galay kulanka. Kulanka furitaanka shirka, Veysi Kurt; 14 2016 June in taariikhda, boqolkiiba TCDD gaadiidka wejigiisa bilaabay inuu kuugu adeego sidii shirkad dawladdu leedahay a, marxaladda ugu muhiimsan ee nidaamka la furfuray TCDD Gaadiidka ka hadlay sida laga bilowga hawsha ka. Sii wad sii wad
Mustaqbalka Waaxda Gaadiidka Turkiga ee Dijitaalka 09 / 05 / 2019 Sida ku cad warbixinta 2019 ee ay diyaarisay KPMG ee Gaadiidka Gaadiidka, waaxda gaadiidka ee Turkiga, oo u diyaargaroobeysa sannadka adag oo la filayo in koritaanka gaabnaanta dhaqaalaha adduunka iyo macaamil ganacsi, ay ka adkaan doonto 2019 si fudud oo ay uga mahadcelineyso jagooyinka juqraafi iyo dabacsanaanta dhaqaalaha ganacsiga dibada. Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay warbixinta, damaanad qaadka waxtarka qaybta, tiknoolijiyada cusub ayaa si dhakhso ah ula qabsanaya. KPMG Turkey diyaariyeen taxanaha Gaadiidka Sector Outlook ee wararka, oo muujinaya dakkada filayaa dhaqaalaha dunida oo dhan ee 2019 sidoo kale saameyn doonaa waaxda gaadiidka. Sida laga soo xigtay warbixinta, isbeddelka sicirka sicirka iyo sicirka saliidda ee xilligii ugu dambeeyay ayaa cadaadis weyn ku saaray qeybta. Iyada oo ay saameyn ku yeelanayso xaaladaha caalamiga ah ee hadda jira, xaaladdani waxay sii wadi doontaa xilliga soo socda.
Gaadiidka Workshop Tareenka (Xoojinta Intermodal Gaadiidka ee Turkey ka leexinayn ee mashruuca Midowga Yurub) 19 / 09 / 2013 Xoojinta Intermodal Gaadiidka ee Baaxadda Project Turkey EU Rail Transport Workshop: Wasaaradda Gaadiidka Badda iyo Isgaarsiinta ee Wasaaradda Gaadiidka sameeyay kaashanaya Spain "Xoojinta Intermodal Gaadiidka ee Turkey u disto Project 2. Marka la eego tayada diyaarinta Sharciga Gaadiidka Intermodal ee shaqada, aqoon isweydaarsi ku saabsan asirka Tareenka Tareenka ayaa lagu qabtay 18 June June 2013 ee Ankara. 2 ee mashruuca. Ujeedada qaybta ayaa ah in la sameeyo hindise sharci-dejineed oo ku saabsan isdhexgalka gaadiidka xamuulka. Dhammaan aqoon-isweydaarsiga waxaa ka soo qayb galay khabiiro, af-hayeen iyo wakiillo ka socda waaxda isboortiga Turkiga ee maamulka Isbaanishka. In siminaarka, Turkey lagu saleyn doonaa in tareenka, taas oo ku siin karaan wadadii ay ku wada intermodality tallaabooyinka ugu haboon ...
Gaadiidka Tareenka ee xaaladaha cimilada 22 / 03 / 2013 Gaadiidka Tareenka ee Xaaladaha Cimilada Ah Ee loo baahan yahay in la abuuro jawi cagaaran oo nadiif ah oo mustaqbal caafimaad qaba oo ammaan ah ayaa hadda hogaaminaya siyaasadaha iyo maalgashiyada lagu fulinayo adduunka oo dhan. Waxaa la fahamsan yahay in habka loo gaaro bartilmaameedyada ka jira qaybta sahaydu ay suurtagal tahay isticmaalka gaadiidka tareenka oo aad u ballaaran. Xaaladdan, dalalka EU-da waxay hagaajiyeen qaab-dhismeedkooda maaliyadeed waxayna kordhiyeen wax-qabadkooda iyaga oo siinaya madax-bannaani maareyneed iyadoo la raacayo Golaha Xeerarka Yurub 91 / 440 oo la xidhiidha waaxda tareenka. Midowga Yurub; Waxaan ka fiirsaneynaa gaadiidka furaha dhaqaalaha casriga ah, waxaanu ku dadaaleynaa in la kordhiyo isu dheellitirka siyaasadaha gaadiidka ee ku wajahan jidadka tareennada, badda iyo biyaha.
Jawaabta Gudoomiyaha Bilecik: 'Maxaysan u sheegin YHT waxyaabaha ka dhiman dariiqa?'
Hoteelka Martida loo yaqaan 'Metro hostel' wuxuu ka furmay degmada Podol ee Kiev
ShipsGo, Shabakadda Daarifka ee Warshadaha Gaadiidka Konteynaradu waxay ku dabaaldegaan Sanadkeedii Saddexaad
Wakiilo ka socda Waaxda Gaadiidka iyo Saadka ee TCDD ayaa la kulmay
Gaadiidka Tareenka ee xaaladaha cimilada
Mustaqbalka Waaxda Sayniska ee Mersin
Gaadiidka duulimaadka hawada ee ka socda adduunka ganacsiga Bursa
BTSO waxay sii wadeysaa hawsha gaadiidka hawada ah
BTSO Logistics Inc. waxay ku bilaabmaysaa gaadiidka hawada ee magaalada Yenisehir